अब निर्वाचन आयोगमा लिगलिगे दौड हुने : फुट्ने निवेदन पहिले कि जुट्ने निवेदन पहिले? – MySansar
अब निर्वाचन आयोगमा लिगलिगे दौड हुने : फुट्ने निवेदन पहिले कि जुट्ने निवेदन पहिले?
Posted on April 22, 2020 April 23, 2020 by Salokya
कोरोना कहरको बेला गज्जबको राजनीतिक नाटक हेर्न पाइएको बुधबार मध्यरातसम्म। यो प्रकरण भोलिसम्म पनि जारी रहनेछ। हतारहतार पार्टी फुट्ने डरले राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण गर्ने सहमति त भयो। तर त्यसले कानुनी मान्यता पाउनका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय कुर्नुपर्छ। पार्टी जुट्नुअघि नै फुट्न अझै पनि प्राविधिक रुपमा सम्भव छ। अब निर्वाचन आयोगसम्म भोलि लिगलिगे दौडको आयोजना हुनेछ। उतिबेला लिगलिगे दौडमा जित्ने राजा भए जस्तै अब निर्वाचन आयोगसम्मको लिगलिगे दौडमा जो पहिलो भयो, उसले मान्यता पाउने हुनसक्छ।
पार्टी जुट्ने सहमति भएकै दिन उता समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष एवम् सांसद रेणु यादवको नेतृत्वमा पार्टी फुटाउने निर्णय पनि भएको छ। यसका लागि यादवसहित सात जना सांसद महम्मद इस्तियाक राई, प्रदिप यादव, उमाशंकर अरगरीया, कलुदेवी विश्वकर्मा र सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङले निर्णय गरेको भनिएको छ। समाजवादी पार्टीको १६ सांसद रहेकोले नयाँ अध्यादेश अनुसार पार्टी फुटाएर नयाँ दल बनाउन सात सांसद भए पुग्छ।
पार्टी एकता भयो भने चाहिँ १४ सांसद भए मात्र पार्टी फुटाएर अर्को दल बनाउन सकिनेछ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को परिच्छेद–२ मा दल दर्ता तथा दलको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान छ। यसमा छुट्टै नयाँ दल बनाउनको प्रावधान यस्तो छ-
अब यसमा अस्ति भर्खर अध्यादेश ल्याएर संशोधन भएको छ। यस अनुसार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यको ठाउँमा वा राखिएको छ।
त्यसैगरी नियमावलीमा दल एकीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था छ-
अब यी सब कागजात लिएर को पहिले निर्वाचन आयोग पुग्ने भन्ने मात्र हैन, निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय गर्ने हो, त्यसले पनि कानुनी रुपमा दल फुट्छ पहिला कि जुट्छ भन्ने तय हुनेछ।
1 thought on “अब निर्वाचन आयोगमा लिगलिगे दौड हुने : फुट्ने निवेदन पहिले कि जुट्ने निवेदन पहिले?”
I’m notapolitician and I don’t like Nepali politics but In my point of view Maoist Leaders in Nepal they all criminal they killed innocent people they must be go jail soon yor later they will punish that’s im 100% Sure, one of most corrupt nation now people tired with Congress and aye ma le ,